Fitaovana elektronika mahery amin'ny starter malefaka
Ny tiroristoranao roa dia mifanitsy mifandraika amin'ny tiroristor enina na ny fatra-pahefana MTX thyristor miisa telo hamoronana mpandrindra elanelam-potoana telo, ary ampifandraiso eo anelanelan'ny famatsiana herinaratra sy ny stator moto.
Ohatra ny fizaran-tany boribory feno fanaraha-maso feno dingana telo, rehefa mampiasa starter malefaka hanombohana ny maotera, dia mihamitombo tsikelikely ny volan'ny output an'ny thyristor, ary mihetsika tsikelikely ny motera mandra-pahatanteraky ny thyristor. Ny motera dia miasa amin'ny toetran'ny mekanika ny lanjan'ny fanovozana mba hahatratrarana ny fanombohana, hampihena ny fanombohana ary hialana amin'ny fanombohana ny diany ankehitriny. Rehefa mahatratra ny hafainganam-pandeha avo lenta ny motera dia mifarana ny dingana fanombohana ary ny starter malefaka dia soloina ho azy ny mpanelanelana amin'ny alàlan'ny contactor bypass mba hanomezana herinaratra nomen'ny motera mba hampihenana ny fatiantoka hafanana an'ny thyristor ary hanitatra ny androm-piainan'ny ny starter malefaka, manatsara ny fahombiazan'ny asa ary misoroka ny fandotoana mirindra amin'ny tariby herinaratra.
Ny starter malefaka koa dia afaka manome fijanonana malefaka izay mifanohitra amin'ny dingan'ny fanombohana malefaka. Mihena tsikelikely ny herinaratra ary mihena tsikelikely mankany amin'ny aotra ny hafainganam-pandeha mba hisorohana ny hatairana tafatsoaka vokatry ny fijanonana malalaka. Rehefa mampiasa fanombohana malefaka, ny fanombohana ankehitriny dia matetika 2 ~ 3 heny amin'ny isa misy ankehitriny, ny tahan'ny fiovaovan'ny bolongana dia matetika ao anatin'ny 10%, ary ny fiatraikany amin'ny fitaovana hafa dia kely dia kely.
Amin'ny fikojakojana isan'andro, tandremo ny fizahana ny toe-piainan'ny fanombohana malefaka matetika. Tandremo sao misy zavatra manodidina ny starter malefaka manakana ny rivotra sy ny fiparitahan'ny hafanana ary alao antoka fa misy toerana malalaka manodidina ny starter malefaka (mihoatra ny 150mm), zahao matetika raha malalaka ny tobim-pizaran-tsinjara, diovy tsy tapaka ny vovoka hisorohana ny fihenan'ny hafanana ary hisorohana ny thyristor tsy ho simba noho ny fiakaran'ny maripana be loatra. Mandritra izany fotoana izany dia afaka misoroka ny lozam-pifamoivoizana sy ny lozam-pifamoivoizana fohy vokatry ny vovoka.
Ny thyristor dia niasa ho toy ny fifehezana herinaratra AC amin'ny starter malefaka. Ho an'ny fampiharana malefaka ambany (malefaka fidirana: 380V), ny lanjan'ny valiny miverina sy miverimberina (VDRM, VRRM) dia atolotra hisafidy 1200V. Fampiharana malefaka (fantsom-pifandraisana: 660V), ny malefaka miverina ary miverimberina (VDRM, VRRM) dia atolotra hisafidy ny 2200V na ambony. Ho an'ny fampiharana herinaratra avo lenta (voltage input≥1100V), ny voltatra miverina miverimberina (VDRM, VRRM) no atoro anao hisafidy 3500V na ambony. To 6KV na 10KV malefaka fanombohana, ny herinaratra avo lenta dia mila thyristors hifanindry mifandray mifamadika avy eo andiany mifandray. Ny starter malefaka 6KV dia mila thyristors 6 (2 tirorista 2 mifanitsy mifamadika amin'ny vondrona 3). 10KV malefaka starter mila 10 thyristors (2 tiroristor 2 mifanitsy mifanohitra mivadika amin'ny vondrona 5). Ny herinaratra mahazaka toy izany amin'ny thyristor tsirairay avy dia ho 2000V ary ny mandroso / miverina tsy azo averina isa - VDSM ary VRSM ny thyristor voafantina dia tokony ho mihoatra ny 6500V.
Runau Electronics dia manam-pahaizana amin'ny famolavolana ny modely thyristor sy ny herinaratra ho an'ny fanombohana malefaka indrindra amin'ny fampiharana avo lenta (mihoatra ny 3000A) sy malefaka (mihoatra ny 6000V). Ny kalitao azo itokisana sy ny fahaiza-manao matanjaka dia mamela ny fampiasam-bola farafaharatsiny mba hahatsapa ny fahombiazana farany ambony. Ny fihenan'ny voltika ambany conductive, ny fahafaha-manao matanjaka kokoa, ny fiatraikany avo kokoa ary ny fanoherana ny herinaratra, ireo fananana voalaza etsy ambony ireo an'ny Runau thyristor dia nahafa-po ireo fepetra iraisan'ny rindrambaiko feno momba ny fanombohana malefaka.
Thyristor Selection Manoro hevitra an'i Reference
(KW / Ao: 380V)
Soft Starter nampiasa ny thyristor (VDRM / VRRM)
Motor naoty amin'izao fotoana izao Ie (A)
Soft Starter nampiasa ny thyristor Itav (A)